प्रकाश सपुतले कथित शुभेच्छुक भन्दै के लेखे यस्तो ? - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः वैशाख २३, २०७६ - साप्ताहिक
प्रकाश सपुतले कथित शुभेच्छुक भन्दै के लेखे यस्तो ?
दोहोरी ब्याटल १ र २ तथा बोलमाया लगायतका गीतबाट एकाएक चर्चामा आएका गायक प्रकाश सपुत चर्चासँगै निरन्तर आलोचना समेत खेपिरहेका छन् । विभिन्न आरोप खेपिरहेका सपुतले हालै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकुमा लामो स्ट्याटस लेखेका छन् । उनले स्ट्याटसमार्फत मनको वह पोखेका छन् ।
यस्तो छ उनको स्ट्याटस
कथित शुभेच्छुकहरुलाई खुलापत्र
मैले आफ्नो कमज़ोरी स्वीकार्दा पनि अलिकति सहानुभूति नराखेर लगातार व्यङ्ग्य र अपशब्दहरु आइरहनु मेरो सिर्जनालाई होइन मलाई कमज़ोर देखेर हो भन्ने महशुस गरिरहेको छु। हुनपनि उमेरले काँचों छु, जति जनाले तुच्छ आलोचना गर्नुभएको छ उहाँहरु उमेर र अनुभवले म भन्दा पाको हुनुहुन्छ। म मुला फुच्चेलाई गन्ने कुरै भएन। संस्थागत हिसाबले म कुनै सम्मानित ओहोदा र पहुँचमा छैन, को डराउने मसँग ?
स्वभावले भावुक र अन्तरमुखी छु लड्न जाँदिन । रुँदा उहाँहरुलाई रमाइलो लाग्ने नै भयो । यस अघिका प्रहारमा मेरो बोल्दिने र बचाउ गर्दिने कोही छैनन् भन्ने कुराको भेउ पाएकाहरुको यसपाली आत्मविश्वास दोब्बर भयो । घाँस खानेदेखि गुखाने सम्मको शब्द प्रयोग गर्न प्रेरित हुनुभयो उहाँहरु। आज ९आइतबार० दिनभरि मलाई एकदमै डिस्ट्रब महशुस भयो। यसअघि अब संगीत क्षेत्रमा काम गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाएको बेला हिम्मत गरेर चरर बरर धररु गीत सार्वजनिक गरेको थिएँ। जसको प्रतिक्रियाले नयाँ उत्साह प्रदान गरेको थियो । ओइ गाँठें केही गर्छु किु भनेर आफैंले आफैँलाई टिकाएँ। त्यसपछिका सिर्जना मा आफूलाई प्रमाणित गरे भन्ने लागेको थियो तर मान्छेले अझै पत्याएका रहेनछन्। नत्र यत्ति एउटा संयोगमा मलाई यति धेरै आलोचना आउने थिएन।
मेरो लामो सांगितिक इतिहास छैन, भर्खर शुरुवात भएको छ । मैल केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बल्ल–बल्ल जुटाएको छु। मेरो कठोर संघर्षको मुख्य उपलब्धि नै यही हो - ‘आत्मविश्वास । विशुद्ध दर्शकको प्रतिक्रियाले ऊर्जा थप्छ । उहाँहरुको आफूप्रति चासो र शुभेच्छा छ है भन्ने लाग्छ । तर, मलाई प्राप्त भएका केही स्क्रिनसटहरु छन्, जसले स्टाटस र कमेन्ट लेख्नु भएको छ। केहीले हो मा हो मिलाउनु भएको छ, उहाँहरु कहिँ न कहिँनिर संगीत भावनासँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ।
कोही अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ। कोही केही समय कलाकारिता गरेर छोडेको हुनुहुन्छ। कोही सक्रिय हुनुहुन्छ । नभए पनि केही सांगितिक संस्थासँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको हुनुहुँदो रहेछ। घरभित्रैको यस्तो प्रहार र व्यवहारले आत्मविश्वास डगमगाउँछ। तर, जस्तै परिस्थितिमा पनि काम गर्न नछोड्नु मेरो स्वभाव हो। दुख्दा रोएपनि गति कम गर्दिनँ। सके उड्न नसके दौड्ने, नसके हिँड्ने त्यो पनि नसके घ्रिसिने तर सपना गन्तव्य र उद्देश्य नछोड्ने । पोहोरसम्म जुन निराशा थियो, त्यो यसपाली छैन । घमण्ड नै गर्ने हो भने ब्याटलु र बोल माया दुई फरक धारका गीतले म नेपाली सबै किसिमका दर्शक स्रोत सम्म पुगिसकेको छु।
म जीवनमा जे बन्न चाहन्थें, त्यो बनिसकें। अब बाँकी केही काम गरेको देखाउनुपर्ने मात्रै छ, जसका लागि टिक्नुपर्छ। टिक्नका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ । धेरै काम गर्दा कहिँ न कहिँ गल्ति हुन जान्छ। तर यतिका वर्ष दुस्ख गरेर देशमै केही गर्ने आत्मविश्वास जुटाएको एउटा उत्साह जोश र केहि नयाँ गर्न प्रयास गर्ने कलिलो केटोलाई यसरी दुरुत्साहित गर्नुभयो भने समयले कहिँ न कहिँ गएर तपाईंहरुलाई नरमाइलो महशुस अवश्य गराउनेछ। नभए पनि पृथ्वी गोलो छ भन्छन् कहिँकतै भेट हुँदा ( मेरा दुई हात जोडिएर तपाईंलाई नमस्कार गर्न मानेन भनेरु सबैलाई मुस्कान बाँड्दै गरेका मेरा ओठहरु तपाईंनिर आएर बन्द भए भने ? पाँच हज़ार अटाउने मेरो फेसबुक अकाउन्टले तपाईंलाई मात्रै बढि देख्यो भने तपाईंको पनि त आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुग्नेछ।
अक्सर प्रतिक्रिया दिन्नँ तर सबैको तस्वीर र नाम मनमा बसिरहेको छ। सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ यसरी लखेट्नतिरै नलाग्नुस्। असल शुभेच्छुकले गाली त गर्छन् तर नियत खराब हुनेहरुले बदनाम गरिदिन्छन्। तपाईंले गरेको गाली कि बदनामी ?
प्रोत्साहन हो कि बर्बादी ? यदि बर्बादीमा रमाउदैँ हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई भर्खरै प्रर्दशित हिन्दी चलचित्र 'कलंक' को यो डाइलग काम लाग्न सक्छ, 'जब किसी और कि बर्बादी अपनी जित जैसी लगे तो हम से ज्यादा बर्बाद और कोही नही इस दुनियामें।'